Njem Omenala Cultural | Otu Di na Nwunye
September 12, 2019 + Colombia, Itineraries, South America, Nhazi njem
Afọ iri abụọ na ise gara aga, Colombia nọ na-emegharị ọnụ na njedebe nke ala dara ogbenye na Medellín, obodo nke abụọ nke mba Andean bụ mpaghara agha agha narco. Ime ihe ike a mere ka a mara aha ya nke kpuchiela akụkọ ihe mere eme nke obodo, omenala dị egwu, na ebe dị egwu. Naanị n'oge a ka ndị njem ụwa na-achọpụta ihe ndị dị oké ọnụ ahịa ndị dị n'okpuru ime ihe ike. Ihe ndị a dị oké ọnụ ahịa na-eme ka ndị siri ike pụọ ma sie ike ịghara ịlaghachi. Medellin ji nwayọọ nwayọọ na-emeri obi ndị njem.
Ya mere, olee ihe na-adọta ndị njem na obodo a na-adọrọ adọrọ n'ime obi ndị Andes na Colombia? Oge 48 anyị Mazi Medellin Ezubere iji gosipụtara gị nke ahụ, ebe ị na-enye gị ụfọdụ n'ime ntụziaka banyere otu esi achọta ebe kasị mma City of Eternal Spring nwere inye.
Rionegro ka El Poblado
Akụkụ a abụghị n'ezie nhọrọ na njem, kama ịhapụ ya na nke a ga-abụ ihe nkwụsịtụ. Ebe ọdụ ụgbọ elu nke Medellín dị ihe dị ka otu awa n'ebe ọwụwa anyanwụ nke obodo n'obodo a na-akpọ Rionegro. Mgbe ị na-apụ na-achọ ihe ịchọrọ maka ụgbọ ala na-aga San Diego. Anyị na-adụ ọdụ ka ị na-atụgharị taxi ka ha dịkwuo ọnụ. Ozugbo ụgbọ ala ahụ na-apụ apụ, ị ga-ahụ na ị na-ebu ụzọ gaa njem ime obodo n'ime ime obodo dị n'azụ Medellín, na nke abụọ n'okporo ụzọ ndị mara mma nke na-agbadata n'obodo ahụ. Echiche ndị dị n'akụkụ ugwu ahụ na-akpali akpali ma jide n'aka na ị ga-ejikere igwefoto gị. Ọdịda anyanwụ dara ọbụna karị. Gbaa ọsọ na nkwụsị mbụ ma jide tagzi n'ụlọ nkwari akụ ma ọ bụ ụlọ gị.
Ugbu a ka anyị kpuchie ụgbọala ahụ, ka anyị banye n'ime oge gị.
9: 00 am Na-eri nri ụtụtụ ma na-echekwa ihu
Nri ụtụtụ na Medellín dị mfe ịchọta na menu na-eche ka ọ dị mfe. Anyị na-akwado ịkụ n'okporo ámá na ịchọta ụlọ ahịa ọ bụla na-ere ahịa huevos y calentado. Nke ahụ bụ ụgbụ na-egbuke egbuke na osikapa na nke bean nke ga-enye gị ike siri ike nke ga-adịru n'ụbọchị. Jide n'aka na ị ga-enweta ihe ọṅụṅụ mkpụrụ osisi, kwa. Nke a abụghị ihe ọṅụṅụ mkpụrụ osisi dị ka ị ga-ahụ na US ma ọ bụ Europe. Ọ bụ ihe odide smoothie-ụdị na ọ bụ ihe niile-gburugburu na-atọ ụtọ. Mee ihe ọṅụṅụ "en agua " dị ka "enche ".
10: 00 am Metro na Metrocable na Parque Arví
Metro Medellín karịrị nnọọ njem ụgbọ okporo ígwè. Ọ bụ otu n'ime ihe nnọchianya ndị na-akọwa obodo na isi iyi nke mpako maka ọtụtụ ụmụ amaala (jụọ ha ihe mere Medellín ji dị mma karịa Bogota na ọ bụ ezigbo nzọ Bogota enweghị usoro metro ga-abịa). Jide ebe ahụ na Poblado na-aga n'ebe ugwu ruo Niquia. Gaa na Acevedo ma soro ihe ịrịba ama ahụ ruo metrocable. Nke mbụ akara ga-akpọrọ gị gaa Santo Domingo ebe ị ga-agbada ma jide akara nke abụọ ahụ gaa Arví. The metrocable na-enye ndị njem ya echiche dị ịrịba ama ka ọ na-arịgo n'elu ugwu ugwu na-agbata obodo. Ị na-enwetakwa anya nnụnụ nke ebe dị iche iche dị iche iche ka ị na-arịgo. Mee ka igwefoto gị dị njikere.
NDỤMỌDỤ: Gaa na bọl tiketi na mbido njem ahụ ma gwa ha na ị na-aga Arví. Ha ga-enye gị kaadị na ego zuru ezu. Swipe kaadị na mbufe ọ bụla ma mee ka akara tiketi.
11: 15 am Họrọ uzo na ije Arví
Ogige ahụ n'onwe ya dị oke, na-ekpuchi 60 square kilomita na 54 kilomita nke ụzọ ụkwụ. Ị nwere ike ịchọrọ ụzọ ụzọ ochie ma chọpụta ihe ndị na-adọrọ adọrọ na nkume ma ọ bụ ụzọ mgbago gburugburu ọdọ mmiri ahụ. Debe anya gị maka anụ ọhịa ma nwee ọhụụ dị n'elu obodo ahụ.
2: 00 pm Na-enweta otu nri ehihie na ogige
Ị nwere ọtụtụ nhọrọ na ogige ahụ mgbe oge ehihie na-agagharị. N'okpuru ọdọ mmiri anyị na-atụ aro ka ndị na-agba ọsọ, salad, na osikapa. N'ahịa (n'akụkụ dị nso na ọdụ ụgbọ okporo ígwè), anyị nwere ike ikwu na ọ dị ọhụrụ pasteles de pollo (ihe ndị na-eri anụ ọkụkọ) na mkpụrụ ụfọdụ. Ọ bụghị n'ebe dị anya site n'ahịa ahụ bụ ebe a na-ahụkarị ụdị nri nri ehihie sancocho, bandja paisa na efere ndị ọzọ ndị obodo ahụ hụrụ n'anya. Ya mere, ṅụọ mmanụ ma gbanye ụkwụ gị tupu ịlaghachi azụ ala ahụ na ịlaghachi n'ugwu ahụ.
3: 30 pm Nweta akụkọ ihe mere eme na La Casa de Memoria
Foto site na Deuniti
Were metro n'ebe ndịda gaa La Estrella ma gaa na Parque Berrio. Site n'ebe ahụ, i nwere ike ịga ije (ntụziaka ebe a) ma ọ bụ jidere ụgbọ ala na ụlọ ihe ngosi nka. La Casa de Memoria bụ ma ụlọ ihe ngosi nka na ihe ncheta nke a raara nye akụkọ ihe mere eme na ndị na-alụ ọgụ na Colombia. Ịbịaru Medellin ma lekwasị anya na akụkọ ihe mere eme nke ime ihe ike ga-achọ ịhụ ọtụtụ n'ime ihe ndị kasị mma obodo ahụ na-enye, mana ịghara ileghara ya anya ga-abụ mmejọ dị oke. Gụzie onwe gị ma nwee mmetụta maka mgbanwe ndị meworo (na ka na-eme) ma na Medellín na obodo n'onwe ya.
5: 00 pm Na-alaghachi n'ụlọ gị ma zuru ike maka abalị ahụ
Medellín pụrụ iche n'echiche ya. Hụ na obodo nke nọ na ndagwurugwu na agbata ndị na-arịgo ugwu ndị gbara ya gburugburu. Anyị, ọ bụ ihe niile gbasara ele. N'iburu nke a n'uche, anyị ewepụtawo ya ụlọ mara mma na obodo Poblado nke onye na-eche ka anyị. Ala nke na-ekpuchi windo n'ime ime ụlọ na-enye gị echiche na ị gaghị echefuru n'oge na-adịghị anya.
Mgbe ụfọdụ, El Poblado na-enweta ihe njo dị njọ maka ọnyà njem nleta, ma ụlọ a dị na mpaghara ndịda nke agbata obi ebe ìgwè mmadụ na-eme nleta agaghị enwe mmetụta dị njọ. Ị na-esikwa na metro na-agba ọsọ ọsọ ọsọ site na ngalaba kachasị mma maka ndụ abalị.
7: 30 pm Dinner na La Aboretteria
Mee ngwa ngwa na-aga n'ebe ugwu ruo ngalaba Provenza nke El Poblado. Nke a bụ nri anyị kachasị amasị anyị na ebe anyị na-ebi ndụ abalị na obodo dum ma maka anyị, ọ bụ onye na-enweghị atụ maka abalị mbụ gị n'obodo ahụ. La Abarroteria na-eme ihe anyị kwenyere na ọ bụ ezigbo ndị na-eri nri na obodo. Gaa maka burger apple and blue cheese burberry na kporo ụlọ. Ọ bụrụ na ị kwụsịrị maka burger na fries, ọ ga-abụrịrị na ị na-ede akwụkwọ banyere ebe a na-ahụ maka ọkwá dị elu.
9: 00 n'emecha elu ruo Envy
Ọ bụ n'oge na-adịghị anya ịkụ ụlọ, ma ị dị njikere ịmalite n'abalị ahụ. Anyaụfụ nwere mma dị mma na oke mma mmanya. Soro ndi mmadu kpebie n'ehihie ma chegharia uche banyere ihe omumu nke ubochi. Ulo elu nke Medellin n'abali bu ihe di egwu site n'uzo.
11: 00 pm Kụrụ onye na-egwu egwu na 15 Minutos de Fama
Ụdị ọkwa abụọ na ndị na-egwu egwu egwu, ọ bụghị ọtụtụ ndị mba ọzọ, na nnukwu ụlọ mere ka 15 bụrụ nhọrọ dị mma maka ịhapụ obere ihe. Egwú dị na mpaghara ime obodo, na ọtụtụ reggaeton (Medellín bụ ebe na-ekpo ọkụ reggaeton) na otu ịgba ọsọ hip hop.
9: 00 m Na-ehichapụ n'abalị ikpeazụ na ihe ọṅụṅụ na nri ụtụtụ paisa
Anyị na-akwado ịchọta ụlọ oriri na ọṅụṅụ ọzọ na mpaghara ma na-agagharị ihe ọṅụṅụ, nsen, osikapa na agwa. Ọ magburu onwe ya maka ịmalite ike ọgwụgwụ na / ma ọ bụ nkwụsịtụ site n'abalị gara aga.
Photo site Niek van Son
10: 00 m Na-ebu ụgbọ ala ahụ gaa Guatape
Site na nkwụ ụgbọ ala jide ụgbọ ala na-aga Guatape (La Piedra / El Peñol) ma nwee obi ụtọ na-agbagharị na obodo Medellín. Njem a na-abụkarị nanị awa abụọ, n'ihi ya, nweere onwe gị ịchọta ụfọdụ z ma ọ bụrụ na i nwetaghị ụra zuru ezu n'abalị ahụ.
12: 00 pm Na-arịgo nkume ahụ
Guatape bụ obere obodo dị n'ebe ọwụwa anyanwụ nke Medellín, ma ihe kachasị mma bụ oké nkume dị na mpụga obodo. Nzọụkwụ 740 dị elu na-eburu gị n'elu wee nye gị otu n'ime echiche kachasị mma na Colombia. Ọdịdị dị elu ga-eme ka ị na-agbaji obere mmiri ọkụ ka ikuku nke dị n'elu kpuchie gị ruo oge ụfọdụ tupu i mee ka ọda.
1: 15 pm Ugbo na obodo
Mgbe ị kwụsịrị ikpere gị na-aga ala ala ahụ, jidere na otu n'ime obere taxi ma gaa isi n'obodo Guatape. Na mmiri, ị ga-ahụ ọtụtụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ ndị na-enye ọhụụ ọhụrụ site n'ugbo nchịkwa obodo. Ị ghaghị ịdọpụ ọkpụkpụ ole na ole, ma mgbalị ahụ bara uru.
2: 15 pm Jụọ ụgbọ mmiri jet ma chọpụta ebe ọdọ mmiri dị
E nwere ụgbọ elu jet na mmiri na ọnụ ọgụgụ mmiri ma ọtụtụ bụ 30 ma ọ bụ 45 nkeji nkeji. Nyochaa ọdọ mmiri ndị a jikọtara na ụlọ ezumike oge a na anoghi n'ulo oba.
3: 00 pm Na-enyocha n'okporo ámá ruo mgbe ụgbọ ala gị ga-apụ
Guatape bụ mgbe ọ na-agba ọsọ pueblo na ndị Medellín, bụ ndị na-anọghị na ndị mba ọzọ, na-adịghị ahụkarị. Otú ọ dị, dị ka Medellín toro n'ọkwá, obodo ahụ enweela mgbanwe, ebe ọ na-ese ụlọ ya agba agba ọ bụla na egwurugwu ma na-eji ihe ọ bụla na-eme ka ọ bụrụ otu - nke na-eme ka obodo ahụ bụrụ ihe dị mma .
Photo de George Donnelly
4: 30 pm Gaa na-agbaghachi azụ ma nwee igwefoto gị dị njikere
Nchikota nke ọkụ n'ehihie / mgbede ọkụ na ebe dị mma na ụzọ ị ga-aga n'ụlọ ga-eme ka ị na-ebelata. 4: bọtịnụ 30 ga-enwe ịbịaru obodo ahụ dị ka anyanwụ na-abanye. Ala ahụ na ndagwurugwu bụ ụwa ọzọ.
7: 30 Dulce Jesus M nwere ike ịkpọpụ gị
Mechie Jizọs chọrọ isiokwu maka onwe ya. Ọ bụ ihe ndị Colombia kpọrọ fonda - ụlọ oriri na ọṅụṅụ / mmanya / izugbe ntụpọ sitere na ndị na-asụ na atọ na ndị Colombia pueblos. Chee echiche banyere ihe eji esi nri na Halloween, Christmas na ihe nkiri. Ikike niile nke agba, ihe ndị dị egwu, na ihe oyiyi nke ihe nkiri na ụmụ anụmanụ na-ekele gị n'ọnụ ụzọ ma n'ime ime gị ihe ndị ọzọ na-adaghị adaba ndị yiri ka ha zuru oke. Kwado nri gị na karama nke aguardiente (nhọrọ ịṅụ mmanya na-aba n'anya), kụọ azụ ma lee ihe ngosi ahụ. Ọ ga-abụ abalị ụtụtụ.
Iji hụ ebe niile ị ga-anọ na Medellin, lelee anyị ụlọ ọrụ nyocha.
* Ọ bụrụ na ị kpebie iwepụta oge na Bogota jide n'aka na ị ga-elele nduzi a na esi achọta nnukwu gọọmenti rụrụ na Bogota!
Mechie foto site na Ivan Erra Yota.
Kemgbe oge 1800, akụkọ akụkọ banyere Jack na Ripper Murders na London East East amawo mmasị ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme na ndị na-anụ ihe omimi gburugburu ụwa. Ugbu a, a na-enyochagharị akwụkwọ akụkọ na-agbagha agbagha nke na-eme ka "Jack the Ripper" nyochaa - ọ ga - emesị mata?
Ya bụ akụkọ gbara ọkpụrụkpụ nke igbu ọchụ na ọnụọgụ nke gbara ajụjụ banyere ajụjụ ndị ọbụla ugbu a, ya na ihe àmà ọhụrụ, ọ ka bụ ihe ọ bụla na-egosi na ọ bụ njide onwe ya. Ihe dị n'okpuru onyinyo o kere na Whitechapel, Otú ọ dị, otu ụzọ ọjọọ ndị ahụ Jack na Ripper jere ije n'etiti ìgwè mmadụ ahụ, ndị a na-amaghị, ndị na-amagbu onwe ha na ndị agadi ochie na ndị na-agba ọkụ na London ndị na-enwupụta pints ruo taa.
Gunthorpe Street n'akụkụ White Hart Pub.
Gaa njem na London Eastern East, na-aga n'okporo ámá ndị ahụ na ịga na saloons ozugbo egwu site ụjọ nke Jack na Ripper ... ma ọ bụrụ na ị na-ama!
Iri Iri Na-agba
84 Commercial St, Spitalfields, London E1 6LY, UK
The Ten Bells Pub, ebe Jack na Ripper kweere na ọ chọtara mmadụ abụọ n'ime ya.
Ihe Iri Iri Na-abanye na Whitechapel bụ otu n'ime ebe ndị na-adịghị mma ebe Ripper ga-ejide ma dọta ndị ahụ. Ụfọdụ ndị ọkachamara na-ejikọta ụmụ nwanyị abụọ a kapịrị ọnụ bụ ndị zutere aka ha mgbe ha gbasịrị akwụkwọ na Ten Bells Pub: Annie Chapman na Mary Jane Kelly.
Ọbụna na-eguzo ruo taa, ọ bụ ezie na ọ bụ na ọnọdụ dị iche na-amalite na 1666, e guzobela Ten Bells ebe ọ dị ugbu a kemgbe 1850 si, ogologo oge tupu Jack the Ripper setịpụ akara ya n'ebe ahụ. Ya mere, akụkọ ihe mere eme bụ akwụkwọ a na-egosi na Jack the Ripper akwụkwọ akụkọ - yana ihe nkiri ahụ - "Site na Hel", nke nke a gụnyere ihe omume Johnny Depp nke na-ekpuchi otu onye na-aga n'ihu Mary Kelly.
Ten Tens bụ ugbu a mara mma na enyi na enyi, okpukpu obi na-ekpo ọkụ na pub site Old Spitalfields Market ke Whitechapel ebe London, na otu n'ime ebe mbụ anyị na-eleta oge ọ bụla anyị nọ na obodo. Ọ bụ ezie na taa, ị gaghị echebara ugo gị anya mgbe ọ bụla ị na-ekpo ọkụ, ihe ncheta dị iche iche nke omume ọjọọ ya nwere ike ịnọnyere gị na mmụọ - karịsịa mgbe ị nwesịrị mmụọ ole na ole!
89 Whitechapel High St, London E1 7RA, UK
The White Hart Pub tinyere Gunthorpe Street.
Ọzọ nke ihe kacha amasị anyị na Whitechapel High Street ebe bụ White Hart Pub. Mgbe n'ihu na-akpọ n'okporo ámá ukwu, gaa ije n'èzí ma tụgharịa gaa n'ahịrị egwu a maara dị ka Gunthorpe Street iji chọta onwe gị na-agbanye na mpaghara Ripper.
Afọ ole na ole mgbe e nwesịrị igbu ọchụ a na-eme n'ógbè ahụ, otu nwoke aha ya bụ Severin Klosowski, nke a makwaara dị ka George Chapman, malitere ịrụ ọrụ dị ka onye na-akwa ụra n'ime ala ụlọ ahịa nke 1890. Ọ dị nso na White Hart Pub na onye a na-akpọ Martha Tabram tụgharịrị gbuo 1888, nke mere ka a banye na Chapman n'obe-ikpe nke ikpe mara n'ihi na ọ dị nso na ebe ahụ, ebe ọ na-arụ ọrụ. Otú ọ dị, ọ mesịrị kwaga United States, mgbe ahụ laghachiri na London, emesịa kweta na ọ bụ igbu ọchụ kpamkpam. Enweghi ike igosi ma obu gosi na o bu, n'ezie, Jack the Ripper, ma otutu kwuru na ya bu onye ikpe.
Nanị n'èzí ụlọ ahịa ahụ, na-agafe ọdụ ụgbọ elu nke na-esote n'akụkụ okporo ụzọ Gunthorpe Street, kwụnye ihe ngosi nke na-ajụ ajụjụ a: "Ònye bụ Jack Onye Ripper?". Gaa na-agbada ala, warara warara n'oge ọ bụla iji cheta okporo ámá ochie nke London ebe ọ na-aga, ị ga-ahụkwa onwe gị ịjụ otu ajụjụ ahụ!
Okporo ụzọ Alleyway na Gunthorpe Street.
Jack na-ejegharị na Ripper
Ụzọ kachasị mma iji nweta akụkọ ihe mere eme na ihe omimi nke Jack the Ripper bụ ịga n'okporo ámá ndị ọ na-eje ije. Ndị nduzi nlekọta ọkachamara nke na-agba gị ume site n'oge gara aga nke Jack the Ripper bụ ndị maara nke ọma na ihe ọmụma, dịka ị na-eleta ọtụtụ ebe ndị mmadụ na-egbu ọchụ n'okporo ámá ndị dị na Ripper.
Nzọụkwụ na-aga n'oge 1888, mgbe ọkụ ọkụ na-agbanye n'ọchịchịrịrị, ọ bụ n'abalị ahụ ka ọ na-abụ ihe mkpuchi zuru oke maka onye na-eme onwe ya. Mgbe ị na-ejegharị n'okporo ámá ma na-agbada ebe Ripper mere ka o gbuo ya, ị nwere ike ịnwe ohere ịdebe akwụkwọ na foto ndị uweojii Victorian jisiri ike iji chọpụta na ọ bụ Ripper.
A na-eji oghere ọcha dị ka White Hart chọọ ihe ncheta nke oge ochie Whitechapel.
Ma ọ bụ onye na-amateur amateur ma ọ bụ onye na-eme ihe nkiri Ripper, njem ndị a na-eme njem bụ ụzọ dị ukwuu iji mee ka ọ bụrụ na ọ bụ ọdụm nke London n'oge ahụ! E nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ dị iche iche enye njegharị na ụzọ ya, chọta onye na-agwa gị okwu ma na-eje ije ebe Jack jere ... na stalked.
New Jack na Ripper Ihe Akaebe - Ọ Na-emesị chọpụtara?
Ònye n'ezie na-agba chaa chaa?
Ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 130, àgwà a ejidewo ọbụna onye nchọpụta kachasị njọ, Otú ọ dị, na isiokwu na-adịbeghị anya bipụtara. The Telegraph, a na-ekwu na mkpụrụ edemede 9,000 dị na 1992 nwere ike igosi kpọmkwem Jack bụ Ripper n'onwe ya.
Ọ bụ ezie na ịkọ nkọ gbara gburugburu akwụkwọ ahụ kemgbe ọ chọpụtara, ihe akaebe ọhụụ yiri ka ọ na-egosi izi ezi ya. Ọ dị ka ụlọ nke dị na Liverpool, o nwere nke onye ọchụnta ego bara ụba aha ya bụ James Maybrick n'otu afọ nke egwu iyi egwu abalị nke Jack the Ripper, nọ na-ewu ebe a na-eche na otu ma ọ bụ karịa nke ndị ọrụ kwesiri ịsụ ngọngọ na mbadamba akwụkwọ ozi. Agbanyeghi na enwere ajuju onye choputara ya na otu o si abanye n’aka onye nwe ya kacha nso nso a, enwere ndenye na-ekpughe nkọwa nke na egbu egbu ma obu onye okacha mara nke oma banyere okwu - ga - enwe ike ide.
A na-eme nnyocha dịkwuo, ọ bụrụ na ihe ọ bụla gosiri na ederede, ma eleghị anya, akara ikpeazụ bụ ihe kacha mma. N'akwụkwọ ikpeazụ na-emenye ụjọ na akwụkwọ edemede na 1889, onye edemede ahụ dere, sị:
"M na-enye aha m na mmadụ niile maara m, ya mere akụkọ ihe mere eme na-agwa, ihe ịhụnanya nwere ike ime nwa nwoke amụrụ.
Gị n'ezie, Jack The Ripper. "
Ọ ga-eme ka ihe omimi ahụ bụrụ ihe a na-agbaghaghị? Ndi, ke akpanikọ, James Maybrick? Ọ bụ ezie na ọchụchọ gara aga na narị afọ gara aga, jiri ụkwụ na-agagharị n'okporo mmiri ahụ, na-agụ akụkọ ihe mere eme, na-eleta ebe obibi ya, na-enwekwa obi ụtọ n'akụkụ ebe ndị ahụ a na-anụrụ.
September 4, 2019 + ụlọ, Europe, France, Hotels, Nhazi njem
Paris ka bụ otu ebe ndị njem kacha ewu ewu n'ụwa, na-akpata nsogbu na ndị na-achọ ebe ha ga-anọ na Paris. Mpaghara ndị a ma ama bụ, nke ọma, ndị a ma ama, na ebe ndị kachasị mma na ụlọ nkwari akụ dị n'obodo ahụ anaghị abịa dị ọnụ ala. Agbanyeghị, enwere ọtụtụ ebe na-adọrọ mmasị ịnọrọ na Paris, yana ọnụ ọgụgụ nhọrọ dịnụ ị nwere ike ịchọta nnukwu ebe ị ga-anọ na nkwadebe zuru ezu.
Obodo ahụ, kewara onwe ya n'ime akụkụ 20 akpọrọ arrondisements, nke bụ mpaghara kacha nkewa nke obodo ahụ nke enwere ike ịtụle n'ezie "agbata" pụrụ iche nke etiti Paris. Anyị ga na-elele akụkọ ndị a dị iche iche anya, ma na-agbasa ihe ndị dị elu na nke dị ala bụ nke ọ bụla iji nyere gị aka ikpebi ebe kacha mma ịnọ na Paris nwere ike ịnọ.
Maapụ - Obodo kacha mma Paris, ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ, na ebe ị ga-aga
Ekewaara Paris ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ala n'etiti otu njiri mara ya dị mma - Osimiri Seine. Paris n'obere ala, dịka ọtụtụ Obodo Obodo Europe, a na-ekekọta ya na ngalaba abụọ buru ibu nke na-agbadakwu. Na Paris, ndị a bụ mpaghara abụọ - Right Bank (nke a na-akpọ Rive Droite) na Left Bank (Rive Gauche).
Banklọ akụ ziri ezi buru ibu nke mpaghara abụọ, yana 14 nke arrondissements nke 20 nke obodo - niile ewepu 5th-7th, na 13th-15th arrondissements.
Ntinye uzo ihe ndi ozo nke Paris, ma obu uzo ano, dika akpokwara ha, anyi na achoputa uzo ihe ato ndi nwere udiri ihe ndia.
Mgbe ị na-atụle ebe ị ga-anọ na Paris, ntuziaka dị mfe bụ ịmara na ọnụ ọgụgụ arrondissement dị ala karịa ka ọ ga - abụ ịbụ okenye, obere akwụkwọ arrondissement nke dịkwa n'etiti obodo. Ndi otu a bu 1st - 6th, nke kachasi na etiti, nke kacha nta na nke kachasi na Paris, tinyere ndi ozo abuo (7th - 12th na 13th - 20th) nke na-abawanye nha ma ibelata n’afọ ka ị na-aga n’ihu site na etiti obodo.
Lelee maapụ Paris ọ bụla, ọ dịkwa mfe ịhụ arrondissements ndị na-agba nwayọọ nwayọọ na-eto site na 1st Arrondissement - nke na-amalite na nso de de de Cite. You nwere ike ihichapụ maapụ dị na maapụ dị n’elu iji hụ na ngwa ngwa ihe ngosi Paris.
Paris Arrondissements - Ntụle
Arrondissements nke Paris niile nwere agwa pụrụ iche ha, ọ bụ otu n'ime ihe ndị ọbịa na-ezigara na Paris ugboro ugboro na-ekwupụta dị ka otu n'ime ihe mere ha ji hụ obodo ahụ n'anya. Ndị mmadụ hụrụ n'anya na otu ma ọ bụ ole na ole arrondissements mgbe ha nọ na Paris, na Paris na-abụrụ ha ihe ngosi. Ọ dị ka obodo nke ya, ọ bụkwa akụkụ nke ịma mma na-abịa mgbe ịnọ na paris.
Ọ bụ ezie na ọ siri ike ihu arrondisse niile nke Paris ka ị nọ ezumike, ị ga - enwe ike nweta echiche zuru oke gbasara ndị na - amasị gị akwụkwọ nduzi a kacha enye gị. Nke a ga - enyere gị aka ịhazi atụmatụ maka onwe gị nke ga - enyere gị aka ịchọpụta ebe ịchọrọ ịnọ na Paris.
Central Paris na Cultural Obi - 1st & 2nd Arrondissements
1st na 2nd Arrondissements bụ obi ilu nke Paris - ọnọdụ nke ntughari, ikike nka, eze, na - n'ezie, akụkọ ntolite. Nke a bụ ebe ọtụtụ ndị ọbịa nọ na Paris bidoro ịrụ ọrụ ka ha banye n'ime obodo, ebe enwere ike ịmalite.
Ihe to Ga-eme: Musee Louvre, Jeu de Paume, Basilique Notre-Dame des Victoires, Carrousel du Louvre
Hotels kacha mma: Ihe ngosi 1st na 2nd ga-eme ka ị na-eme gị $ 150-200 USD n'otu oge, nke na-abụghị ihe ọjọọ ịtụle ọnọdụ ị nwere na mkpịsị aka gị. Ndị a bụ ụfọdụ n'ime nhọrọ kachasị anyị maka mpaghara ahụ
Moliere Hotel - Nnukwu njedebe, n'etiti $ 175 na $ 225 USD kwa abalị. Ihe kacha mma? O nwere nnukwu sauna na hammam, yana ime ulo na ihe ndina dicha nma.
Castille Paris - Bido n’agbata $ 225 na $ 250 USD kwa abalị, Castille bụ ezigbo ọmarịcha uru dị na etiti Paris.
Hotel le Pradey - Etu ha na-akwụ ụgwọ na gburugburu $ 175 USD kwa abalị, mana nyocha ndị ahụ dị ịrịba ama na Hotel le Pradey zuru ezu na ụlọ oriri na ọ restaurantụ -ụ dị na saịtị dị n'okpuru ọkwa okporo ụzọ.
Paris, France - Mee 8, 2016. Okporo ụzọ dị jụụ nke nwere ụlọ oriri na ọ restaurantsụ inụ na mpaghara bohemian Marais nke Paris
Le Marais bụ otu n'ime usoro ihe ngosi ndị mara mma karị na Paris, ọ bụkwabu mpaghara mpaghara amara nke ndị France. Ọ na-adọrọ mmasị na ya, ọ bụkwa otu n'ime ebe ị ga-anọ ogologo oge mgbe ịnọ na Paris.
Ihe to Ga-eme: Musee National Picasso-Paris, Le Mary Celeste, Le Jardin du Marais, Ebe de La Bastille
Hotels kacha mma: Le Marais bụ mpaghara a na-achọsi ike, mana ị nwere ike ịchọta nnukwu ụlọ obibi maka n'okpuru $ 200 USD kwa abalị. Na Paris, nke ahụ bụ nnukwu ọrụ!
Le General Hotel - Site na $ 125 gaa $ 175 kwa abalị, dabere na oge. Ọ bụ obere ụlọ, ọmarịcha ụlọ oriri na nkwari akụ nke ahụ bụ otu n'ime ụkpụrụ kacha mma n'obodo.
Hotel du Haut Marais - Nnukwu ọnọdụ na nnukwu ọnụahịa - n'okpuru $ 200 USD kwa abalị! Ọ bụ nnukwu hip, na ngalaba nke na-ewu ewu n'ezie nke Le Marais.
Enwere obere agwaetiti abụọ n'etiti Seine bụ ma akụkọ ma ama ma ama. Ile de la Cite na Ile St. Louis bụ ebe ị ga - aga ịchọ ụfọdụ cafes na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ kacha mma na Paris, ndị ọbịa jupụtara na ya. Gbalịa mee atụmatụ!
Ihe to Ga-eme: Katidrale Notre Dame de Paris, Ebe Dauphine, Crypt Archeologique de l'Ile de la Cite, Galerie Dutko
Hotels kacha mma: Nhọrọ dị ụsọ n'agwaetiti a, mana anyị na-akwado n'ezie Hotel de Lille. Ọ mara mma, mara mma, ma bụrụkwa ezigbo uru na ihe dị ka $ 150 - $ 175 USD.
Quarter Latin na St Germain de Prés - 5th / 6th Arrondissement
Quarter Latin bụ otu n'ime ihe ndị kachasị ewu ewu na Paris, naanị ịga ije ngwa ngwa ga-agwa gị ihe kpatara ya. Ọ bụ akụkọ ihe mere eme, ọrụ n'aka, ike, ma nwee ụfọdụ nri kachasị mma n'obodo. Ahịa nri bụ ụfọdụ n'ime ihe kachasị mma na Paris, ọ na-emekwa maka ezigbo ebe obibi ịnọ mgbe ị nọ n'obodo.
Quarter Latin nwere ike ịbụ mpaghara ama ama nke Paris na ebe obibi na mahadum. N’ezie, aha otu ụzọ ahụ ka edere n’oge a asụsụ asụsụ ụmụakwụkwọ nọ na mahadum a bụ Latin.
N'elu oche nke akuko nke Rome, Latin Quarter bu ihe nlere anya oge nile nke ndi Paris. Ọ bụkwa ebe dị mkpa maka ịdị adị, ma taa nwere ụfọdụ ogige kachasị mma (na nke kacha ochie) n'obodo. Gbalịsie ike lelee Jardin du Luxembourg, n'enweghị ajụjụ!
Ihe to Ga-eme: Pantheon, Le Jardin du Luxembourg, Jardin des Plantes, Luxembourg Obí
Hotels kacha mma:
Les Bulles de Paris - Ego Art Deco na-ezute-ụlọ gboo gboo ugbu a nke dị na Seine. N'okpuru $ 200 USD ọtụtụ afọ.
Họrọ Hotel Rive Gauche - Ime ụlọ nwere ebe dị ọcha dị ọcha, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ Scandinavia. N'oge oge oyi, ị nwere ike ịchọta ụlọ ebe a maka obere ihe dị ka $ 150 USD kwa abalị!
Eiffel Tower - 7th Arrondissement
7th dị ezigbo mkpa na Paris, yana ụlọ nwere ike ịbụ akara ngosi kachasị ama ama n'obodo - Eiffel Tower. Ọzọkwa, ọ bụ ebe ngosi ihe mgbe ochie ebe a na-ekpo ọkụ, ọ na-aga Seine.
Ọ bụ ezie na anyị abụghị ndị na-akwado onwe anyị ịnọ na mpaghara a n'ihi na ọ bụ n'ezie ọrụ karịrị anyị, ọtụtụ ndị ọbịa na-anụ ụtọ ndụ abalị dị egwu na Paris na-agakarị n'okporo ụzọ gafere ọchịchịrị.
Ihe to Ga-eme: Ifflọ Eiffel, Rodin Museum, Museum Army, Orsay Museum
Hotels kacha mma: Nọrọ na Pullman Paris Njem Eiffel. Feel ga enweta ezigbo ọ andụ na nlele abalị kachasị anya n'obodo na Towerlọ Eiffel na-elegharị anya ozugbo!
Zụ ahịa - nke ahụ bụ isi ihe ịmara gbasara Champs Elysees. Ọ na-agwụ agwụ na Arc de Trimphe, wee malite na Le Place de la Concorde, nke bụ ihe abụọ kwesịrị ịdị na ndepụta aha “Paris-Paris” gị.
8th bụ ebe ga-amasị ụfọdụ ihe dị ọcha n'ihi ịzụ ahịa, dị ka ụlọ ahịa ụwa ama ama kwụsịrị n'okporo ụzọ a na-adọrọ adọrọ ma na-adọrọ adọrọ. Otu uzo, agbanyeghị - ụgbọalala na pslọ Elysees. Okporo ụzọ ahụ na-agba ara, ma ọ bụrụ na i nwebeghị ahụike ịnya ụgbọ ala n'obodo abụghị ihe egwuregwu.
Ihe to Ga-eme: Champs Elysees, Ebe de la Concorde, Champs Elysees Garden
Hotels kacha mma:Hotellọ oriri na ọ hotelụ bestụ kacha mma na ọnụ ahịa kacha mma? Ajuju adighi - nwalee ndi mara mma Hotel Bradford Elysees.
Paris Opera - 9th Arrondissement
Ihe dị mkpa ebe a bụ Palais Garnier, ụlọ 'opera na 19 nke narị afọ nke Paris nke bụ n'etiti ụfọdụ n'ime ụlọ ndị kacha mma n'obodo. Enwere nnukwu ụlọ ahịa na Galeries Lafayette, na ọtụtụ ụlọ oriri na ọ inụ inụ na 9th arrondissement.
Ihe to Ga-eme: Palais Garnier, Grands Magasins, Galeries Lafayette
Hotels kacha mma: Ọ bụghị mpaghara kachasị amasị anyị ka anyị nọrọ na Paris, mana ọ bụrụ n'ezie na ị nwere ebe a na ndepụta gị n'ihi ịzụ ahịa na njem ọha, soro ndị Hotel Hotel-Marc. Ọ dị ntakịrị ọnụ karịa ọtụtụ ụlọ akụ na 9th arrondissement, mana o ruru ya!
10th Arrondissement - Stin Stin
Might nwere ike ịbanye na Paris site na oge 10th arrondissement, mana akwụla ebe a.
Ọ bụ ezie na Jardin Villemin dị mma, ọ nwere ike bụrụ naanị ihe ndọtị ama ama nke kwesịrị ịhụ. N'agbanyeghị nke ahụ, enwere ọtụtụ nnukwu ubi na Paris. Mpaghara a, n'ezoghị ọnụ, nwere ike ịdị egwu ma bụrụkwa onye na-adịghị n'otu n'abalị.
Chere ma ọ bụ pụọ, mana akwụla ebe a.
Ihe to Ga-eme: Gare du Nord, Gare de l'Est, Jardin Villemin
Canal Saint-Martin & 11th Arrondissement
Mgbakwunye 11th bụ nke enwere ike ịtụle ma ọ bụrụ na ị na-eme njem na mmefu ego. Ọ bụ obere ebe nwere ọtụtụ cafes na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ trendụ ndị na-ewu ewu, ma na-enye nnweta ozugbo na Osimiri Seine.
Nnukwu nleta ụbọchị, Canal Saint-Martin nwere ọtụtụ ahịa mara mma na ọtụtụ nnukwu nri.
Ihe to Ga-eme: Cafe de la Danse, Atelier des Lumieres
Enwere otutu ihe ime na 12th arrondissement, nke bụkwa nke kacha ukwuu na Paris ’20 ukara arrondissements.
Ọ bụ ebe dị mma ịnọ mgbe ị nọ na Paris, nweekwa ụfọdụ nnukwu ihe ọ ga-eme, gụnyere Bercy Village, Opera Bastille, Aligre Market, na ọtụtụ ndị ọzọ. Ọ bụ otu n'ime ebe kachasị mma ịme njem ma fuo na nnukwu ụlọ oriri na ọ .ụ .ụ.
Ihe to Ga-eme: Bois de Vincennes, Chateau de Vincennes, Aligre Market, Bercy Village
13 nke a ka nma inọrọ karịa ka ị na - etinye oge dị ukwuu, ebe ọ bụ na enwebeghị ọtụtụ ihe ị ga - eme. Arrondissement a bụ ụlọ karịa, mana ọ bụ ọmarịcha, mpaghara dollar nwere ọtụtụ ụlọ ọgbara ọhụrụ nwere mmetụta nchekwa na ịda mba - mana ọ bụchaghị ihe ịtụnanya ma ọ bụ iche na Parisi.
Ihe to Ga-eme: Caflọ oriri na ọ hotelsụ Nụ mara mma, ụlọ oriri na nkwari
Isi na ọkpụkpụ dị na Paris Catacombs
Ndị Parisi 140,000 enweghị ike ịdị njọ maka ebe nkiri nke mpaghara ndịda mpaghara. Nke ahụ bụ ka ọtụtụ na-ebi ndụ, na-arụ ọrụ, na-azụ ahịa ma na-egwu na 14th Arrondissement. Agbanyeghị na ọ dịchaghị na ndepụta njem ebe ndị njem ga-eleta, anyị na-achọpụta ọtụtụ ihe ga-amasị maka 14th - gụnyere aro iri na abụọ a.
Catacombs bụ isi ihe kpatara ị jiri bia 14th n’ihe gbasara ihe ị na-eleta, mana ọ bụ ebe mara mma ịnọ. Ọ na-ekpo ọkụ, na-akpọ oku, otu n'ime ihe ndị dị ọcha arrondissements, na nke ukwuu nke ezinụlọ-centric arrondissement.
Ihe to Ga-eme: Catacombs nke Paris
Enwere ụlọ ahịa bụ obere ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ niile na Vaugirard, yana otu n'ime ahịa anyị kacha amasị na Paris - Grenelle Market. Ọ bụ ezigbo ebe ịnọ, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị na-emefu ego.
Ezigbo ụlọ ahịa na ọmarịcha ebe a dịkwa adị na Vaugirard, dịka ịchọrọ ị gaa na Parc Andre Citroen na Rue du Commerce.
Ihe to Ga-eme: Ahịa Grenelle, Rue du Commerce, Parc Andre Citroen
Arc na Bois - The 16th Arrondissement
16 bụ nnukwu arrondissement maka ọtụtụ ebumnuche, gụnyere Bois de Boulogne, Musee Marmottan, na n'ezie, Arc de Triomphe. Near nọrọ nso Osimiri Seine anaghị emerụ ahụ!
Wezụga nke ahụ, Trocadero bụ otu n'ime ebe kachasị amasị na Paris, ọ nọ na 16th arrondissement. Ọ bụ ezie na ọ bụ nke kachasị gbasaa ị ga-enweta n'etiti etiti Paris, enwere ọtụtụ ụlọ ọmarịcha ọfụma na ụfọdụ ụlọ oriri na ọ bestụ bestụ kachasị mma n'ụwa na 16th arrondissement.
Ihe to Ga-eme: Trocadero, ọtụtụ ụlọ oriri na ọ Micheụ Micheụ ndị Michelin na-agụ, Musee Marmottan
Arrondissement 17th - Ebe ndị Parisi na-akpọ n'ụlọ
Ọ bụrụ na-ịchọrọ ịnọ na ebe na Paris nke ahụ dịtụ nwayọ ma dịkwa jụụ, 17th bụ nnukwu nhọrọ. Enwere ahịa dị n'okporo ámá dị egwu, ihe nlegharị anya, boucheries, na cafes. Nri dị ebe a dị egwu, ebe ọ nwere nnukwu ndepụta nke ụlọ oriri na ọ Micheụ Micheụ Michelin, na ụlọ oriri na ọutiụ boụ mara mma - n'agbanyeghị agbanye na mpaghara obibi.
Ihe to Ga-eme: Parc Monceau
Montmartre - The 18th Arrondissement
Ihe ọchị na artsy Montmartre bụ otu n'ime ebe kachasị mma ịnọ na Paris, yana otu ịchọrọ ịtụle. Enwere ọtụtụ ihe ị ga-eme, ọtụtụ ihe ị ga-ahụ, ọ ga-esiri gị ike ikpebi ihe ị ga-ebu ụzọ mee!
Igwe Moulin bụ nnukwu njem nlegharị anya, mana Montmartre bụ ebe ebe ịkwesighi ịme ihe ọ bụla. N'ịbụ nke a gbara n'akụkụ ugwu dị na Paris, ọ bụ otu n'ime ebe kachasị mma ịnọ mgbe ị ka nọ na Paris.
Ihe to Ga-eme: Sacre Coeur, Montmartre, Moulin Rouge, Dali Museum
Egwu, Sayensi na Ogige - Oru 19th Arrondissement
19th bụ nnukwu agbataobi ịnọ n’ime ya, n’agbanyeghi na ọ bụghị ebe etiti nọ. N'iburu nke a, nke ahụ bụ obere ihe kpatara anyị ji eche na ọ bụ otu n'ime ebe kachasị mma ịnọ na Paris.
Enwere egwu, okike, isi iyi mmiri, na ọ dị mfe ịnweta nnukwu ụlọ oriri na ọutiụ boụ. Ga acho ileta Cite de la Musique, the Paris Philharmonic, na Buttes Chaumont iji nye onwe gi otutu nnabata.
Mgbe ị na-atụle ebe ị ga-anọ na Paris, nke a bụ ihe omumu ebe ị nwere ike ịchọta ebe ngwakọta mara mma na ụlọ oriri na nkwari akụ etiti.
Ihe to Ga-eme: Cite de la Musique, Philharmonie de Paris, Buttes Chaumont
Pere Lachaise & Belleville - 20th Arrondissement
Jim Morrison fans, dịrị n'otu!
Pere Lachaise bụ ọnọdụ ebe ili ozu ndị ama ama na Paris, nke bụkwa ebe izu ike ikpeazụ maka akụkọ ifo ndị France dịka Victor Hugo, Chopin, na Marie Curie. Belleville bụ mpaghara dị jụụ ma mara mma, mana 20th abụghị otu mpaghara anyị kachasị amasị anyị ịnọ na ya. A na-akwụ ụgwọ maka ebe obibi, mana ọ bara uru ileta ebe a na-eli ozu ma nwee iko mmanya na Belleville.
Ihe to Ga-eme: Ebe a na-eli ozu Pere Lachaise, ógbè Belleville
Ọ bụ ezie na ọ bụghị ọkwa gọọmentị, La Defence bụ ụlọ ọrụ azụmaahịa ọhụụ na Paris na-ebunye obere akụkụ ma dị mkpa n'etiti etiti obodo ahụ.
Enwere ọtụtụ ndị ọbịa ahịa na-abịa Paris kwa afọ, ọ bụ ebe a ka ọtụtụ n'ime ha na-anọ. N'enye ike nke ọnọdụ azụmaahịa, enwere ọtụtụ ụlọ oriri na ọ restaurantsụ --ụ - ọtụtụ n'ime ha bụ ntakịrị karịa na njedebe dị elu. Na-achọ nnukwu ụlọ oriri na ọ Micheụ Micheụ Michelin? Ọ bụ nnukwu ebe ịmalite!
September 3, 2019 + California, Nri na ihe ọṅụṅụ, Ozi ndị a, North America, Nyocha, United States
"Bars kacha mma na San Francisco" dere Mimi McFadden - onye na-ede blọọgụ njem na onye edemede na-ede akwụkwọ. Site na California, ọ nọwo na-agagharị ụwa kemgbe 2013. Mgbe ọ naghị ede akwụkwọ, ị nwere ike ịchọta ya n 'ọhụụ nke biya, ịchụso mmiri mmiri, ma ọ bụ na-eme atụmatụ njem ya ọzọ n'ala ọzọ.
Mgbe ọ biri ná mba ọzọ ruo afọ ise n'Australia, New Zealand, Thailand, Gris, na Portugal ọ chọtachala ụlọ na San Francisco, California. Ị nwere ike ịchọta ya Instagram, Facebook, na blog ya, Obi Atlas.
Na-achọ nkwụsịtụ mkpirikpi ebe ị nwere ike izu ike ụkwụ gị ma nọrọ jụụ mgbe ị na-eme njem nlekọta ezumike mmiri San Francisco na jam gị? Na-eche ebe ị ga-aga iji wepụtụ anya mgbe ị gachara ọrụ izu ike gị?
Were ya n'aka onye bi na San Francisco na onye na-enwe mmasị ịṅụ mmanya na-aba n'anya n'oge na abalị - ụlọ mmanya ndị a bụ ụfọdụ n'ime ụlọ ndị kachasị mma, ndị kasị ochie, na ebe ndị kasị atọ ụtọ ịṅụ mmanya na San Francisco.
Enweghị mmụba ọzọ, ndị a bụ ihe m na-ahọrọ maka osisi ndị kacha mma na San Francisco - site na bọtịnụ ndị a ma ama na ogwe osisi mmanya ndị ahụ!
Maggie McGarry si
Mpaghara: North Beach
Iji mejuo ndi Irish-pub lovers, Maggie McGarry's (ma obu Maggie's) bu uzo di ogologo na mpaghara San Francisco si North Beach na nke a. Ama Irish pub eche.
N'ụbọchị ị nwere ike ịpịpụta maka pint na egwuregwu egwuregwu na otu n'ime ọtụtụ TV na nguzobe, n'abalị na-ejide n'aka na ụkwụ aka ekpe gị dị njikere ịgba egwú.
Kwa izu ụka ọ bụla, mmanya ahụ na-ekpuchi ndị na-eme egwuregwu na-eme ihe nkiri ahụ, na-atọ ụtọ ọtụtụ narị afọ nke San Francisco bụ ndị na-ezukọ ebe a ọtụtụ abalị Friday na Saturday.
Ị nwekwara ike ịhazi ihe pụrụ iche na Maggie si dị ka ha nwere akụkụ nke mmanya ahụ nwere ike ime onwe ya. Ha ahụla akara bachelor & bachelorette ọzọ, ụbọchị ọmụmụ, ọrụ ọrụ, ị na-akpọ ya. Weta na egwu nke onwe gị ma ọ bụ dee otu n'ime ọtụtụ ihe mkpuchi nke na-eme ka ihe ọkpụkpụ na akpụkpọ anụ na-acha na nke ọ bụla e mere na izu ụka.
Na-abụ abụ ma na-agba egwú n'obi gị ruo n'oge nke oge a na ndị na-atụgharị ọnụ - ị ga-enwe nnukwu mgbawa oge ọ bụla ị na-aga Maggie.
Obodo agbata: Marina
Otu n'ime ọdụ ụgbọ ala ole na ole n'obodo ahụ, Jaxson nwere ọhụụ dị egwu-na-eche na ya na "mba ọzọ" vibes maka abalị kachasị na Marina.
N'ezie, ọ bụrụ na ị jụọ mpaghara gbasara Jaxson, ha nwere ike ịsụ ude ma kwuo ihe dịka "ebe ahụ dị njọ", mana ọ bụrụ na ị gụọ n'etiti ihe ndị a, ị ga-aghọta ihe ha bụ n'ezie ekwu bụ na Jaxson dị njọ nke na ọ dị mma. Ọ bụ ogwe osisi ndị mmadụ na-achọ ịkpọ asị ma ebe ọtụtụ ndị obodo na ndị njem na-ejedebe site na njedebe nke abalị.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta ahụmahụ ụlọ mmanya ahụ, chee na ị nwere obi ụtọ na Jaxson na-akwado ụda egwu na egwu egwu ọtụtụ abalị nke izu. Ị nwere ike ịkụ na e nwere Fireball gbaa ọhụụ na nke a oruru.
Ụzọ dị mma isi mee ndị enyi na obodo ọhụrụ (ma ọ bụ agadi) bụ iji nweta obi ụtọ na ndị ọzọ na-elekọta, nke dị mfe na Black Horse London Pub, obere ụlọ mmanya dị na San Francisco na 19ft x 7ft. Echefu banyere San Francisco - nke a bụ otu n'ime osisi kacha mma na California! Ị ga-achọsi ike maka onwe gị kpọmkwem otú obere ụlọ mmanya ndị Briten dị.
Ịnyịnya Black bụ akụ dị n'ógbè nke Marina District nke bụ biya NA ego naanị. Na ndị beers na ice na ngwa nju oyi (* bathtub nkịtị n'azụ ụlọ mmanya) na ime ụlọ ịwụ na-enweta naanị site na iji nlezianya na-emepụta usoro na ọtụtụ "ihe ngọpụ m" na ndị enyi ọhụrụ gị, James "Big Dawg" King (onye nwe ụlọ na obi ) ga-ejide n'aka na ị nwere oge ntụrụndụ mgbe ị kwụsịrị ebe a.
Ndi agbataobi: Umu ndi ozo
Buena Vista Cafe bụ otu n'ime ụlọ ndị kacha ochie na San Francisco (bụ. 1916) ma guzosie ike dị ka onye na-ahụ maka nchekwa Irish Coffee savant n'obodo. Ọ bụ ihe dị ka ihe ngosi na ebe nkuku ya na Wharf Fisherman ma na-azọrọ na a ma ama bụ ịbata Irish Coffee na San Francisco n'ụsọ (na obi).
Ruo taa, ha na-eji otu ụzọ nhazi ahụ maka Irish Coffee dịka mgbe cafe malitere na 1952. Ndị njem nleta na ndị obodo abụọ ga-echere n'ahịrị nanị iji nwaa concoction a ma ama ma nọdụ ala maka nri iji rie nri na Bay.
A nuru ya na cafe ejewo ozi dika 30 nde Irish Coffees. I nwere ike ikwu na ha nwere ike ịhazi uzom ugbu a. Kpoo ma kpoo afo gi na otu n'ime ndi a mara mma SF.
N'ịnọgide na isiokwu "ochie" anyị, Northstar Cafe bụ otu n'ime ụlọ mmanya kacha ochie na San Francisco.
Ọ bụ ntakịrị mkpọtụ na ebe egwuregwu na obi North Beach. Ọ bụghị naanị na ọ bụ otu n'ime osisi ndị kacha ochie na obodo ahụ, ma ọ bụkwa otu n'ime ihe ntụchi dị na San Francisco na-egosi ọwa Buffalo, NY egwuregwu. Gaa Ego ma gaa Ụlọ Ọrụ!
Enwere ike ịgbapụta ma ọ bụ na-echere gị mgbe ị na-agba ọsọ na mmiri nke azụ na azụ, na-aṅụrị ọ bụla nke ndị beers na mgbata ma ọ bụ mmanya ọhụrụ. Ntughari ohuru kachasị ọhụrụ bụ igwe elekere eletrọniki ka ị nwee ike ijide n'aka na ụda nke kachasị amasị gị na-akwụsị 'abalị niile.
Ụlọ Red Red
Ndi agbata obi: SOMA
Na-enwe mmasị na ụtụtụ n'emekere ụtụtụ? Red's Java House dị n'akụkụ Bay na SOMA. Ọ dịghị dị ka ihe dị site n'èzí (ma ọ bụ n'ime) mana ọ ga-emeju hops na nkịta ọkụ ọkụ!
Site na ịbanye ma n'ime ma n'èzí, ị nwere ike ijide olulu mgbe ị na-enwe mmasị na njiri Bay nke ọma ma were obere nkịta ma ọ bụ ezigbo burger zoo.
Ọhụụ nke Onye Ngwá Agha
Mpaghara: Fillmore District / Western Addition
Ọ dịghị ihe ọ bụla, ọ dịghị onye nwere ike iguzogide ezigbo ịnweta mmanya! Onye na-eme ihe nkiri na-eme ka Ụlọ Nzukọ Alaeze San Francisco dị mma, ma ọ ga-ebuga gị n'obodo ahụ ma banye na paradaịs agwaetiti.
Smuggler's Cove bụ kitschy mmanya nke na-egosipụta ihe fọrọ nke nta ka oke ego nke pirate-haed ihe ndozi.
Ha nwere ihe karịrị ụdị 200 dị iche iche nke mmanya na ọtụtụ mmanya mmanya na-esi na ya. Ịmaghị ọkwa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịṅụ mmanya na-agwụ ike, a na-enye ụfọdụ ihe ọṅụṅụ mmanya n'ite mpempe akwụkwọ, okpokoro isi, ma ọ bụ iko glasgow whiskey.
Ebe a bụ isi ya na ha ga-eme ka Pirate nke Caribbean na-agba na Disneyland ka ọ bụrụ ụlọ mmanya. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị bụghị nke ahụ n'ime ihe ndị dị n'elu, ha na-atọ ụtọ.
Obodo agbata: Nob Hill
Na-achọ ihe obere obere ọkwa? N'elu Mak bụ ebe mmanya mmanya na-atọ ụtọ nke dị n'elu ụlọ elu nke Mark Hopkins Hotel na Nob Hill, a dị nnọọ mpaghara ọkụ maka ndị ndụ ndụ luxuriously.
N'elu Mak nwere echiche ngosi 360 maka obodo ahụ ma mara ya maka mmanya mmanya ya, "The Foggy Martini", nke akụkọ a na-ekwu na ọ bụ na mmiri mmiri na-esi na San Francisco.
Ọkwá na-efe efe na Bow Bow
Obodo agbata: Chinatown
O siri ike ịchọta otu ìgwè mmadụ, Bow Bow Cocktail Lounge (ma ọ bụ Bow Bow) bụ ebe dị egwu na egwu na karaoke mmanya na Chinatown.
Ha na-eje ozi obere ego n'emeghị ihe ọ bụla mgbe niile ma na-elekọta ndị na-aṅụ ụlọ dị ala na-abịa n'ehihie na abalị iji mee ka ụda olu gị dị elu.
Ọ bụ ego ma ọ bụrụ na akụkọ akụkọ (ma onye nwe ya) na-arụ ọrụ gị, Mama Candy, onye na-awụnye ihe ọbụla maka whiskey maka onye ọ bụla na-atụ ụjọ.
E nwere ya! Onye nduzi magburu onwe ya ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ na ị na-aṅụ mmiri na San Francisco ma ọ bụ na-achọ ka ị na-esi ísì ụtọ n'ehihie n'ehihie n'obodo.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ebe ị ga-aṅụ na San Francisco, ma ọ bụ na California n'ozuzu ya, echefula iji lelee post m banyere kasị mma California Beers iji nwalee.
Sante, proust, chaim, salud, na cheers!
August 30, 2019 + Appetizer, Europe, Nri na ihe ọṅụṅụ, Italian, Italy, Obere ala, Ezi ntụziaka
Ọ bụrụ na ị na-achọ obere ngwa ngwa, ala ala, na agụụ nri nke ahụ na-eju eju iji mee ka afọ ju gị, ụdị olu portobello ndị Italiantali zuru oke maka gị!
N'iji ngwa nri ọdịnala traditionaltali, ịnwere ike ịme ọtụtụ ọdịiche dị iche iche na efere a. Togwakọta ihe a ntakịrị, nwaa iko ndị a na mado pasta na-acha uhie uhie na-agwakọta ya na ndochi ma ọ bụ kpuchie elu ahụ. Otu ụdị aghụghọ a na-arụkwa ọrụ na alfredo ma ọ bụ ụdị ọ sauceụ chiiz ọ bụla!
Oge Nkwadebe10 mins
Oge nri30 mins
Ọrụ: 6 ndị mmadụ
8 nnukwu ahihia olu portobello ewepu gills
5 tablespoons mmanu mmanu na-eleghi anya tinyere mgbakwunye maka ịwụfu mmiri
1 1 / 2 iko panko achịcha crumbs
4 garlic cloves mpi
11 ounces (Akwụkwọ nri) 11 cupbaby
7 ounces chi cheese ikochi (iko iko 1 / 3)
1 / 4 Iko ọhụrụ Mint doo
Dozie ogwe aka nri na ọkwa nke elu na nke etiti na oku okpomoku rue ogo 475.
Ete mmanu mmanu nwere mmanu ngaji 3 na oge ya na nnu na ose.
Hazie ahihia na-ete ede n’elu mpempe akwụkwọ a imara andara andara andara andara andara andara andara n'ọkụ ruo mgbe ọ dị nro, ihe dị ka nkeji 15.
Gwakọta panko, galiki, nnu ngaji 1 / 4, ose ngaji 1 / 4, yana mmanụ ntụ ọka 2 na nnukwu ite Dutch. Debe ite n’elu ọkara dị ọkụ ma sie nri, na-akpali mgbe niile, ruo mgbe panko na-acha aja aja karịa, ihe dị ka nkeji 2.
Dụchaa ya na akwụkwọ nri ma esi nri ruo mgbe ị gafere, ihe dị ka nkeji 5. Gbanyụọ ọkụ, kpoo ọkụ na fri 1 feta na lemon zest.
Mepee olu gill akuku ma kesaa ndochi n'uzo n'etiti ha.
Wụsịa iko 3 / 4 iko feta n’elu ma mee achịcha n’elu akwa ruo mgbe feta bidoro agba aja aja, ihe dị ka nkeji 8.
Iberibe mmanụ na mmanụ, fesaa ya na Mint, ma jee ozi.
Cal Bailey na-agba ọsọ Mountain Leon - a blog njem ọ malitere mgbe afọ abụọ na backpacking gburugburu ụwa. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere ndụ na okporo ụzọ ma ọ bụ ndụmọdụ maka njem, ị nwere ike ịgụ akwụkwọ ọhụrụ ya banyere ịhọrọ akpa ụra ezi.
Turkey bụ mba mara mma juputara n'ihe na-atọ ụtọ ịme na ebe ịhụ. Ebe ị ga-emerịrị bụ Istanbul, ebe a na-agbado nka, omenaala, azụmahịa na njem. Istanbul nwere ọnụ ọgụgụ mmadụ kachasị elu n'obodo niile nke Turkey, na-eme ka ọ bụrụ ebe njedebe zuru oke iji nweta oke egwu na mgbagha nke nnukwu obodo mba ọzọ.
Istanbul dị nnọọ ọnụ maka ndị na-eme njem na mmefu ego. Ọ nwere ike ịmekwu nchọpụta na imepụta ihe, ma ọ ga-ekwe omume ịmepụta obodo a dị ịtụnanya na-enye n'emebighị akụ. Ọzọ, anyị nọ ebe a iji nyere gị aka ịhazi atụmatụ dị ala njem na Turkey ị gaghị echezọ ma ọlị!
Asụsụ: Turkish na English
Ego: Turkish Lira
Efu: A na-atụ anya ịtụba n'etiti 5-10% na ụlọ nri. Mgbe ị na-ewere tagzi, a gaghị atụ anya ka ị gwụ ọ gwụla ma ọkwọ ụgbọala na-enyere gị aka ma ọ bụ nyekwuo aka.
Nchedo & Scams: Kpachara anya maka tagzi ndị na-enweghị mita ma ọ bụ gbalịa ịgosi na i nyeghị ha ego ziri ezi. Were oge gị mgbe ị na-akwụ ụgwọ ma kwuo ego ahụ n'olu dara ụda ka ị na-enye ya ha. Kpachara anya maka obodo ndị chọrọ ka gị na gị bụrụ enyi ozugbo ma "gosi gị obodo ahụ". N'ihe ụfọdụ, ị ga-ahapụ gị akwụkwọ ego na njedebe nke abalị nke ịṅụ oriri na ịṅụ mmanya. Ọ bụrụ na ị jụ ịkwụ ụgwọ, ịnwere ike iyi egwu, ma ọ bụ njọ. Na, dị ka mgbe niile, mara pickpocketers na obodo ọ bụla njem nleta ị na-eleta.
Otu esi agba gburugburu
Enwere ọtụtụ ụzọ ị ga-esi jiri ụgbọelu gaa na họtel gị na iji chọpụta obodo ahụ. Ụfọdụ na-enwekwu ego karịa ndị ọzọ.
Tagzi. Ọ bụghị ụzọ ụgbọ ala kachasị dị ala, mana ọ kachasị mfe ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịga ebe ị na-aga ma echegbula onwe gị banyere ụzọ ndị e si aga. Ọ bụrụ na ị na-emefu ego, a na-atụ aro ka ị mara usoro usoro mgbasa ozi ọha na eze.
Ụgbọ njem ọha. Istanbul nwere nkwekọrịta nke njem ọha na eze ma doo anya. Enwere ụgbọ okporo ígwè, trams, ferries, na egwuregwu nke ga-akpọrọ gị gaa ebe ọ bụla ị ga-ahụ. Ọ bụrụ na ị ga-anọ na Istanbul maka ihe karịrị otu ụbọchị, ị ga-enweta Istanbul Kart bụ nke metro-pass nke na-arụ ọrụ maka ụdị uzo niile. Naanị ị na-ebu ya na otu n'ime kaadị kris (na-anọ na nkwụnye aka na-agafe n'aka) na-aga. Iji kaadị ahụ na-enye gị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 50% kwụsịrị ụgwọ ndị a na-aga n'ihu. https://www.theistanbulinsider.com/how-to-get-an-istanbul-kart-and-is-it-worth-it/
Hop na Napụ Bus. Ọ bụrụ na ị nwere ụbọchị ole na ole iji nyochaa obodo ahụ, ịzụta ntinye mkpuchi maka ikpochapụ bọtịnụ ụgbọ ala ga-enye gị ohere ịhụ saịtị ndị dị mkpa na-enweghị nchegbu banyere ịbịakwute onye ọ bụla. Ụgbọ ala nwere ọtụtụ ụzọ ị nwere ike ịzụta tiketi maka (site na onye ọkwọ ụgbọ ala) ma mgbe ahụ ị na-ahụ ụbọchị dum iji chọpụta ebe ma ọ bụ na-agbagharị maka njem nlegharị bọmbụ. Ụtọ bụ okenye 33 bụ ọkachamara.
E nwere ọtụtụ ndị mara mma, mmefu ego-omume enyi, nhọrọ ị ga-ahọrọ na Istanbul. O nwere ike ị gaghị anọ n'ụlọ elu ụlọ nkwari akụ nke 5, ma ị ga-enwe ntụsara ahụ na nchekwa. Kedu onye chọrọ ụlọ dị oke ọnụ mgbe obi ụtọ obodo ahụ dị n'èzí gị?
N'ebe dị mkpa, Star Holiday hotel na-enye udo nke uche na ihe onwunwe gị dị mma, akwụkwọ dị ọcha, ị ga-enwe ezigbo ụra abalị. Ụlọ niile na-abịa na WIFI n'efu, ụfọdụ na-agụnye oriri mmemme. Gwa na oche n'ihu maka ihe ndị ị ga-eme nso na ha ga-enye gị ego na ọtụtụ ebe nkiri. https://www.expedia.ca/Istanbul-Hotels-Star-Holiday-Hotel.h1269887.Hotel-Information
Maka otu nhọrọ nhọrọ na-emefu ego ọzọ, lelee Ụlọ Ahịa Cheers. A na-emepụta ya kacha mma n'ụlọ ezumike na Turkey maka 2018 site na Hostelworld na nke a abụghị ihe ijuanya. Site n'inye WIFI n'efu, ikuku oyi, na ebe nchekwa nchekwa, Cheers na-enye ọnọdụ dị mma ma na-atọ ụtọ iji soro ndị njem ibe gị. Ọzọkwa, ha nwere ọtụtụ ihe onwunwe na aro maka ebe ị ga-aga na Istanbul. https://www.hostelworld.com/hosteldetails.php/Cheers-Hostel/Istanbul/37282?dia=500
Ihe ime na Lee
Ndekọ nke ihe ntụrụndụ na Istanbul nwere ike ịga n'ihu ruo mgbe ebighi ebi, ma ọtụtụ ndị anaghị eji oge ahụ ezumike ezumike! Ya mere, ebe a bụ ihe kacha elu 3 ọnụ ahịa anyị nwere:
Ịzụta Istanbul Museum Pass, 85 Lira
Nke a ga-enye gị ohere ịbanye n'elu ụlọ iri na abụọ, ihe ncheta, na ebe nkiri na Istanbul. Ọ dị irè maka ụbọchị atọ, ma ọ dịghị mkpa ịgba ọsọ n'ihi na njem a na-enyekwa gị ohere ịwụnye ọ bụla akara. Ozugbo ị hụla ebe niile na-enweghị mmasị, njem ahụ na-enyekwa nnukwu ego ka ọ bụrụ ihe ndị ọzọ. Nke a bụ MUST maka onye ọ bụla hụrụ Istanbul na mmefu ego!
Na njem a, ị nwere ike ịbanye na-esonụ maka n'efu: Hagia Sophia Museum, Topkapi Palace Museum, Istanbul Mosaic Museum, Rumeli Hisar Museum, Yildiz Obí, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Were Bath Turkish, 50 Lira
Ịsa ahụ na omenala hamam bụ otu n'ime ntụrụndụ ndị na-atọ ụtọ ma na-adọrọ mmasị na-achọ ịbanye na Istanbul. N'ihi na ọ na-ewu ewu, ọnụahịa maka baths na central hamams dị nnọọ elu. Maka ụzọ dị ọnụ ala ị ga-esi na-asa ahụ n'otu oge, na-aga na agbata obi nke Uskudar dị n'èzí Central Istanbul. N'ebe a, ị ka ga - enwe ike ịnya ụzụ, ịsa ahụ na - asa ahụ mgbe ndị ọkachamara na - eme ka ị daa, ma maka otu ụzọ dị nta.
Lelee Bazaa Ukwu maka Nchekwa Ọnụ
Bazaar Ukwu na Istanbul bụ otu n'ime ahịa ndị kasị ochie e kpuchiri ekpuchi n'ụwa. Na, ọ bụ n'efu ịbanye. Were onwe gị na njem nleta onwe onye nke ahịa ka ị na-asọfe n'okporo ụzọ na n'ime ụlọ na-amasị gị. Debe map google gị na ekwentị gị ka ọ na-abụkarị maka ndị njem nleta na-efu! Ị ga-achọta ọtụtụ akpa akwa, oriọna, na ụrọ; niile zuru oke maka ihe ncheta nke njem gị. Mgbe ịchọtara ihe ịchọrọ, echefula na ị ga-akwụ ụgwọ ahụ.
Istanbul bụ obodo nke ọgaranya, omenala, na obi ụtọ. Enweghi otutu ihe iji mee ma hu, ma oburu na inwere ego, i ghaghi ime atụmatụ njem gi nke oma. N'ụzọ dị nro, enwere ọnụọgụ nhọrọ ndị bara uru, n'ihi ya, ịhụ Istanbul na mmefu ego na-ekwe omume.
Ọ bụrụ na ị jirila ndụmọdụ ọ bụla dị na ntụziaka a maka njem gị gaa Istanbul, ka anyị mara na ihe ndị a!
Foto site na Pedro Szekely.
August 23, 2019 + Central America, Guatemala, History, omenala
Guatemala bụ mba na-adọrọ adọrọ nke Central America, sandwiched dị n'ebe ugwu-ihe ka ukwuu n'ime mpaghara dị n'etiti Mexico, Belize, Honduras na El Salvador. Mpaghara mara mma nke ugwu ugwu, ebe mmiri ozuzo, ugwu mgbawa, na mkpọmkpọ ebe n'oge ochie, Guatemala na-enye ohere maka ezumike maka ndị na-achọ ebe mgbaba na obere obodo nke jupụtara ebe ndị mara mma na nke akụkọ.
Ihe na-egosi mmalite akụkọ ihe mere eme na Guatemala abụghị nanị na o nwere ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị ochie na-egosi ọrụ ụmụ mmadụ na Americas (karịa 12,000 BC), kamakwa ọnọdụ ya dị ka ebe siri ike maka Alaeze Ukwu Maya nke na-eme nke ọma na Central America ruo mgbe 900 AD. Na mgbakwunye na ihe ndị dị ebube na Guatemala, ihe akaebe nke ndị Mayan buru ibu na-aga n'ihu na-adọta ọtụtụ nde ndị njem nleta kwa afọ na obere ala a dị n'ime ma eleghị anya otu n'ime ebe kachasị eleghara anya maka ndị ezumike n'ụwa. Oge ezumike ọ bụla na Guatemala bụ njem n'ime oge gara aga, nke jupụtara n'okpukpe na ndị mmadụ, nke mere Guatemala otu n'ime ebe kachasị akpali mmasị na ụwa maka ndị na-achọ ileba anya n'akụkọ ihe mere eme.
Lee ụfọdụ n'ime anyị saịtị kachasị amasị na saịtị Guatemala.
N'ebe ugwu Guatemala, ị nwere ike ịga na isi obodo Mayan na Central America - Tikal. Dị ka otu n'ime obodo ndị kasị ibu na Mayan, obodo Tikal nwere nnukwu mmetụta na akụkọ ihe mere eme na sayensị dịka ebe iji ghọta n'ezie ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịghọta ndị Maya. Ebe Ndebe Ihe Nketa UNESCO, Tikal bụ saịtị nke ihe egwu dị oké mkpa n'agbanyeghị na ebe dị mgbagwoju anya nke obodo dị ike nke dị n'etiti ebe mmiri dị n'etiti Central America. Achọpụtawo ihe ngosi ndị a mgbe ha chechara echiche, Tikal guzoziri taa Chichen Itza dị ka otu n'ime ebe kachasị mkpa na Mayan lore.
Ọgaranya na-enweghị ihe mkpuchi stellas, pyramid, ụlọ nsọ, na ebe obibi ndị mmadụ, ọtụtụ n'ime Tikal kweere na a ka na-edina ha n'okpuru oké ọhịa, na-eme ka ọkpụkpụ ndị ọzọ na-esiri ike. Ịga n'ihu na-agbalị ịghọta na Tikal emepụtala ọtụtụ ihe, ọ ghọtara ugbu a na ebe gbara ya gburugburu gụnyere Tikal nwere ike ịbụ na ọ nọ n'ụlọ ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde mmadụ.
Obodo ochie nke Antigua
Obodo Antigua, nke e guzobere na 1543, bụ nnukwu ọnụ n'etiti obodo Guatemala. Mgbe ahụ a na-akpọ Santiago de los Caballeros, na Spanish akụkọ ihe mere eme tinye na obodo a ka palpable. Echere ya na ụkwụ nke Volcan de Agua, Antigua nwere ọtụtụ ụlọ pụrụ iche na ụlọ gọọmentị dị ka Catedral de Santiago, Palacio del Ayuntamiento, Iglesia Palacio de Los Capitanes Generales, na ebe obibi nke Merced. Ebe a na-enweta UNESCO site na 1979, Antigua na-eme ka mkpọmkpọ ebe ndị Spain mara mma nke ugwu mgbawa nke Guatemala guzobere, na-echebe saịtị ndị a siri ike.
Iji ghọta n'ezie akụkọ ihe mere eme nke Guatemala n'èzí nke ike Mayan, na ịbanye n'ime mmetụta ndị Spen na-esote Mayan, Antigua bụ ọnọdụ dị mkpa.
The Crater Lake Atitlán, nke dị n'ebe ọdịda anyanwụ nke isi obodo Guatemala City, bụ ọhụụ nke ihe karịrị iri na asatọ site n'ịdị elu nke asatọ. N'ịbụ ndị ugwu mgbaba iri na abụọ gbara gburugburu, ọnọdụ ya weere ọnọdụ dị nnọọ ka ọ bụ akụkọ ifo na Guatemala tupu Spanish. Ọtụtụ ndị chere na ọ bụ ọdọ mmiri kachasị mma n'ụwa, ị nwere ike ịga nleta ndị dị egwu dị ka Laguna San Pedro na Santa Catarina Palopó, obodo mara mma ma mara mma na mpaghara Solola. N'ezie, ebe obibi nke Atitlan jupụtara na obodo nta ndị ọ dị mkpa ka a hụ na ha nwere ahụmahụ, dịka onye nke ọ bụla nwere ihe ijuanya ya n'ụzọ dị egwu, nri na-edozi ahụ, na ndị na-ekpo ọkụ, ndị mara mma.
Maka photophiles na shutterbugs, na Ọdọ nke Atitlan kwesịrị iso n'etiti ebe ị na-aga eleta na Guatemala. Na-enye na ị nwere ike ịgafe elu ọdọ mmiri n'èzí n'otu ụbọchị, Atitlan na-enye gị ohere zuru oke iji jide ọhụụ ọhụụ ọ bụla dị n'akụkụ dị iche iche. Ọ bụ naanị otu n'ime ihe ndị kachasị mma, ebe a na-eme ka ọ bụrụ ebe a ga-eleta na Central America dum.
Naanị 19 kilomita na mpụga Guatemala City bụ nnukwu ọkụ ọkụ na-atụ egwu Pacaya. Ugwu ọkụ ọkụ na-arụ ọrụ karịa ihe karịrị 8,300 ụkwụ elu, Pacaya bụ nke na-adịbeghị anya gbawara na 2010, na-agbawa agbawa mgbawa n'ime ogidi dị na mbara igwe nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na Pacaya si elu. Akuku na-efe efe na-adaba na Guatemala City, na ọdụ ụgbọ elu ụwa, La Aurora, na-echetara ọtụtụ ndị ike Pacaya ka na-eche.
N'agbanyeghị ihe ize ndụ ndị nwere ike ịnweta ọkụ ọkụ, Pacaya ka bụ saịtị nke njem njem nleta ndị na-abia ọ bụghị nanị iji chọpụta isi nke ugwu mgbawa na-ezuru foto ndị mara mma, kamakwa iji nwee mmiri ịsa ahụ dị na mpaghara. Maka ndị na-adịkwu ntakịrị na-adọrọ mmasị, e nwere njem ndị na-enye ọkara ụbọchị hikes n'akụkụ nke ugwu mgbawa ahụ. Ọ bụ ezie na ọ dị aghụghọ dika ọ na-ada, njem ndị a na-emepụta mgbe nile na nyocha sayensị na mpaghara nke nwere ike igosi ma ọrụ ọ dị nso.
Ndị bi n'obodo ahụ na-akpọ 'La Nueva Guatemala de la Asunción' dị ka 'Guate', na ebe kachasị mma maka nleta ọ bụla na Guatemala.
Isi obodo Guatemala bụkwa njem nleta, na mgbakwunye na ụlọ ọrụ nlekọta. Ọdụ ụgbọ elu La Aurora na-enye ndị nleta ọhụụ kwa ụbọchị ka ha na-eleta anya na Historic Center, dika Palacio Nacional de la Cultura, Casa Presidencial, Plaza de la Constitución na Catedral de Ciudad de Guatemala. Mgbe otu ụbọchị na-eme ihe ncheta akụkọ ihe mere eme na katidral mara mma, ị nwere ike ịhapụ n'abalị - dịka Guatemala City nwere otu n'ime ihe nkiri ntụrụndụ kachasị mma na Central America!
Egwu ndị dị na Guatemala ka na-ezobe ọtụtụ akụ. El Mirador, ugwu nke Tikal, bu ezi ihe omuma atu nke a.
A chọpụtara nanị omenala nke Mayan nke El Mirador na 1926, na afọ ole na ole ka e mesịrị, njem siri ike malitere ịchọta ọtụtụ akụ ndị dị na mbara ala ya. A na-ekpuchi ụlọ nsọ, stellas, na ọtụtụ ụlọ na El Mirador, na-agbanye n'ihe a kwenyere na ọ dịkarịa ala kilomita iri.
A na-akpọkwa obodo Quetzaltenango nke dị n'ebe ndịda Xela, nke mara mma nke ochie ochie na-amalite site na oge May-Mayan na oge ọgaranya ya na narị afọ nke iri na itoolu, mgbe Quetzaltenango bụ obodo dị mkpa n'oge ochie Central America kọfị ụlọ ọrụ. Ebe a na-eme ihe akụkọ jupụtara na ụlọ ochie ndị mara mma nke na-echeta akụkọ ihe mere eme nke South America na-ewusi ike dika Lima, Peru, naanị na obere ọnụ ọgụgụ.
Quetzaltenango bụ nke a maara nke ọma dị ka obodo mahadum, ụlọ ọrụ azụmahịa dị mkpa na obodo maka ịzụ ahịa. N'oge ememme ngosi kwa afọ, ihe niile a na-ejikọta ọnụ na ndị njem nleta si n'America niile na-eleta obodo karịa ndị 600,000.
N'ebe ndịda Guatemala, nke dị nso na Amatitlán Lake mara mma, bụ obodo na obodo San Miguel Petapa. A na-elekarị obodo ahụ anya maka ememe ọdịnala na nke okpukpe a na-eme mgbe nile, bụ ndị a ma ama nke ọ bụ Danza de Las Flores na Feria Patronal, a na-eme na Septemba maka nsọpụrụ nke onyeisi ndị mmụọ ozi St. Michael. Nke a bụ obodo iji mee ka ị ṅụọ onwe gị na akụkọ ihe mere eme na ọdịda nke Guatemala na ndị Guatemalan, dịka ememe ndị a na-anụ mgbe nile na narị afọ gara aga na oge nke Guatemalan dị mkpa na ọha-eze Mayan.
A maara Chichicastenango nke ọma na Guatemala maka omenala K'iche 'Maya na ahịa a na-ere. A na-ahụkarị omenala 'Chichi' n'ahịa, nke jupụtara na nkà, ihe ụtọ, ọla, ihe nkpuchi, herbs, uwe, akwa na okooko osisi. Ihe ndị ọzọ na-adọrọ mmasị n'obodo ahụ gụnyere chọọchị Santo Tomás (ụlọ nke 400 mara mma nke e wuru n'elu ụlọ elu nke Columbian), ebe a na-eli ozu Chichi, na Cerro de la Democracia.
Ahịa nọgidere na-abụ isi ihe, dịka ọ na-agbatị ruo kilomita site n'etiti obodo a dị ntakịrị ma dị egwu.
Na Guatemala City, na campus nke Francisco Marroquín University, ị nwere ike ịga na Popol Vuh Museum. N'ihe dị ka narị afọ nke iri na itoolu site n'aka Maazi Jorge Castillo, gosipụtara ihe osise dị ịrịba ama nke omenala Mayan. Ndị ọbịa na ụmụ akwụkwọ mahadum nwere ike ịchọta akụkụ nile nke akụkọ ihe mere eme Pre-Columbian n'ụzọ zuru ezu, dịka ị ga-ahụ ihe ndị yiriki, ihe oyiyi nkume na ebe akụkọ ọdịnala nke a na-atụle chi dị iche iche nke Mayan na ncheta. Enwere ike ịdọrọ aha ụlọ ihe ngosi nka na akụkọ ihe mere eme, akụkọ omenala nke ndị Mayan K'iche.
Maka ndị na-eme akụkọ ihe mere eme, Guatemala bụ oriri maka uche na nchọpụta miri emi nke ma ọganihu Mayan na Central America nakwa nke Spanish conquistadorian. N'okpuru oké ọhịa na n'etiti ugwu mgbawa, ịma mma nke Guatemala dị. Jide n'aka na iwere igwefoto gị, ịhụnanya ị hụrụ n'akụkọ ihe mere eme, na akpịrị ịkpọ gị nkụ.
August 19, 2019 + culinary, Nri na ihe ọṅụṅụ
August 18, 2019 + Asia, Ozi ndị a, Thailand, Nhazi njem
Olu egwu egwu, egwu somber nke Portual, bu ndi mmadu ndi nwere obi uto ma nwee obi mgbawa nke nwere ike ichota na 1820 (na ikekwe na mbu) na Lisbon. Fado nọ n'ọtụtụ ụzọ okwu nke ndị na - emechi ọnụ nwere nkwurịta okwu banyere obi nkoropụ, owu ọmụma, na nkwụsị kpam kpam n'oge 1960 na 70s, dịka Portugal nile dabara adaba na nrụrụ aka nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị - n'ikpeazụ na - eme ka ụzọ 1974 mara dị ka " Agbanwe Agbanwe ".
Kpachara "Lisbon Bad"Site na ụfọdụ, Fado bụ, na abụ abụ abụ nke mwute, nke kachasị, na agbajikwa. Taa bụ ihe atụ nke oge gara aga karịa ihe na-egosi ọnọdụ dị ugbu a, ebe afọ iri anọ gara aga dị nnọọ mma karịa Lisbon, n'ezie dum Portugal. Ma, ịghọta Fado ka na-aghọta Lisbon n'ụzọ ụfọdụ, na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime ihe dị oké mkpa iji nweta obodo ahụ.
Ị ga-eche na site n'ichekarị Fado n'etiti ndị Lisbo na ụdị ejiji a ga-apụta ma dị mfe ịchọta mgbe ị nọ n'obodo. N'eziokwu, ọ bụghị. Lisbon bụ obodo azụ-alleys, ugwu, mgbanwe dị elu, na ụfọdụ ụlọ ọrụ ndị na-adịghị ahụ anya bụ ndị dị oké ọnụ ahịa, ma nwee ihe ọ bụla dị mma maka nsogbu nke ịchọta ha.
Mgbe anyị nyochachara na ịjụ ajụjụ banyere ndị obodo, Otú ọ dị, anyị nwere ike ịchọta ebe dị mma iji hụ ụfọdụ Fado dị na Lisbon. Ugbu a, anyị na-ahapụ gị n'ime nzuzo - ebe kachasị mma ịchọta egwu Fado na Lisbon, ma nwee obi ụtọ ndụ abalị na Lisbon!
Foto site n'aka Jennifer Woodard
Ọ bụrụ na enwere otu isiokwu na ọtụtụ n'ime ụlọ ọrụ a ebe Fado nwere ike ịchọta, ọ bụ na ha dị ọ bụghị n'etiti Central Lisbon. N'ezie, ebe kachasị mma ịchọta Fado na Lisbon bụ n'ebe ndịda nke Plaza Marques de Pombal, nke dị n'akụkụ ndịda nke Bairro Alto.
Tasca do Chico bụ otu n'ime ebe a maara nke ọma na Bairro Alto ịchọta Fado, nke na-eme na Mọnde na Wednesday malite na 21: 00 (9: 00 pm). Ọ ga-adị gị mkpa ịbute n'isi ụtụtụ, dị ka ebe dị obere na-ewu ewu, nke ndị obodo na ndị njem nleta na-agakarị.
Adreesị: R. do Diário de Notícias 39, 1200-108 Lisboa, Portugal
Ezigbo ụlọ oriri na ọṅụṅụ na okpuru ulo nke 17th century palace, Cafe Luso bụ a nnukwu culinary na ngwugwu ntụrụndụ nke tọrọ ntọala na 1937. Ọ bụ ebe akụkọ ihe nkiri nke Fado na-eme ihe nkiri bụ Amália Rodrigues na 1955, na-eburu ya otu n'ime akụkọ ndị kachasị dịka ebe a ghaghị ịhụ Fado.
Akwụsị elu nke nkwụsị karịa ụfọdụ nke "ụdị osisi" nke nwere ike ịchọta Fado, ndapụta ga-achọkarị, nke a ga-eme site na ebe nrụọrụ weebụ ha.
Adreesị: Tv. na Queimada 10, 1200-365 Lisboa, Portugal
Nri ndị Portuguese omenala na ụda Fado na ọnọdụ dị jụụ na nke na - adịghị ahụ anya - nke ahụ bụ ihe Clube de Fado bụ maka. Ntọala a nke Crusez na Ọ na-enye gị ihe niile ịchọrọ na ụlọ Fado na-enweghị akpafu akpa gị ma ọ bụ na-enye gị mmetụta nke "nsị".
Ọ dị na ụlọ dị ka Clube de Fado, dị mfe, ọchịchịrị, na ọkụ, ebe ezigbo ụda Fado ga-agafe na ọnọdụ dị mma.
Adreesị: 1100-009 Lisbon, Portugal
Ebe dị naanị pasent abụọ site na Tasca do Chico na Bairro Alto, A Severa bụ ebe dị elu na mpaghara ebe ọ bụrụ na ị na-achọ ezigbo "njem" nke Fado na ndịda Lisbon.
Ebe dị elu karịa ikwu, ikekwe Clube de Fado, A Severa emegheela kemgbe 1955 na eme choro ka ndi mmadu banye. Otú ọ dị, ọ bara uru, dị ka ha na-emekarị ka ụfọdụ n'ime ihe ndị a ma ama na Fado na-eme ihe ngosi site na ụfọdụ ndị ọkachamara a ma ama na Lisbon.
Adreesị: R. das Gáveas 51, 1200-206 Lisboa, Portugal
Ebe kachasị elu na district Alfama, ị nwetara ihe ị na-akwụ na Tasca Bela. A na - enweta ego maka ego, ihe ọṅụṅụ, na ndụ Fado, nke e debere na ọmarịcha ịma mma bụ Lisbon ndịda ọwụwa anyanwụ. Tasca Bela nwere otu n'ime akụkọ kachasị mma n'etiti ndị na-eri nri na-enweghị ihe ọhụụ na-enweghị "ntụrụndụ" nke ihe omume.
Adreesị: 1100 445, R. dos Remédios 190, Lisboa, Portugal
Malite na 1937, Adega Machado bụ otu n'ime ọgbakọ Fado na-agba ọsọ na Lisbon - mana ọ bụ karịa nke ahụ. Ọ bụrụ na mbụ ị na-eche na-enwe na-eto eto n'ezie na-eto eto culinary Portuguese ochie na nke abuo na egwu, Adega Machado bụ ọsọ gị.
Ọ bụ ezie na Fado dị oke, nke nri bụ ihe efu.
Adreesị: Rua do Norte, nº 91, 1200-284 Lisboa, Portugal
Ụfọdụ nwere ike ikwu na A Nini bụ ebe ezigbo Fado ndụ.
Enweghị ntụsara ahụ, ọ dịghị ihe ọ bụla, ọ bụ nanị ebe dị mma ma dị mma na nnukwu nri, ọnụ ahịa ọnụahịa, na ụfọdụ n'ime ihe kasị mma Fado na omenala ọ bụla. Ọ bụ ebe mara mma na ebe kachasị mma maka ụbọchị ịlụ di na nwunye na Lisbon, bụ nke na-akpọkarị akụkọ ifo Maria Da Nazaré na Celeste Rodrigues.
Adreesị: R. Dom Francisco Manuel de Melo 44A, 1070-015 Lisboa, Portugal
Nakwa na mpaghara Bairro Alto bụ Retiro dos Sentidos, obere ntinye ntụrụndụ ọzọ nke na-egosi egwu Fado egwu n'abali. Ọ bụ ezie na ihe oriri adịghị na ụfọdụ n'ime ụlọ ọrụ ndị a kpọtụrụ aha na mbụ, nke a bụ ebe dị mma, obere ebe maka ịṅụ mmanya ole na ole na egwu dị egwu. Ihe ha ji efere bụ nri ndị ọzọ a pụrụ ịdabere na ya, ma ị ga-achọ iwe ego dị ka ndị na-azụ ahịa na-emekarị mkpesa banyere ntinye aka na WiFi nke na-emetụtakarị ike ha ịhazi kaadị.
N'agbanyeghị nke a, ọ bụrụ na ị na-achọ ebe dị mma, nwee euro ole na ole n'akpa gị ma chọọ nanị ịnụ Fado ma nwee biya, Retiro dos Sentidos bụ ebe dị ụtọ.
Adreesị: A, R. do Diário de Notícias 40, 1200-144 Lisboa, Portugal
Foto site Jimmy Baikovicius
Ọ bụ nnukwu, ọ bụ ihe mara mma, ọ mara mma, mana ọ dịkwa magburu onwe.
Casa de Linhares abụghị ebe izu ike na ebe obibi ndị ụfọdụ nwere ike ịchọ, ebe ị na-aṅụ mmanya na abalị mmanya Lisboan dị ọkụ, kama ọ bụ ihe eji eji ejiji akwa nke dị na ụlọ Linhares - usoro nke ihe fọdụrụnụ a Ụlọ nlọghachi nke dara n'ala ala ọma jijiji nke 1755.
A na-eme ememe a na-eme ememe n'ezie ebe a, ọnụ ahịa ndị a adịghịkwa ka ọ dị elu dị ka onye nwere ike ịtụ anya (Lisbon bụ otu n'ime obodo kachasị mma na Europe dum) nke nwere ihe ndozi menu mgbe ụfọdụ gbasara $ 40 USD.
Casa de Linhares bụ nke kasị mma ebe a na-enwe ụbọchị abalị na Lisbon, otu n'ime ihe ndị na-atọ ụtọ maka nnukwu nri na Fado.
Adreesị: Beco dos Armazéns do Linho 2, 1100-037 Lisboa, Portugal
Kemgbe 1975, Senhor Vinho ka a ebe a ma ama maka Fado na nnukwu ụlọ oriri na ọṅụṅụ nke Lisboan nke ndị njem nleta na ndị obodo na-ama. Otu ụlọ nri mara mma, Senhor Vinho na-ejikarị ihe osise Fado ama ama, gụnyere Aldina Duarte, Vanessa Alvez, na Filipa Cardos.
Adreesị: R. Meio na Lapa 18, 1200-724 Lisboa, Portugal
Mechie foto site na Chris